Kedu ihe na-eme ka usoro redlink na-aga nke ọma?
Mgbe ọ na-abịa kpọmkwem usoro njikarịcha Search Engine (SEO), njikọta njikọ njikọ dị n'etiti ihe ndị isi nchịkọta nke Google ji mee iji chọpụta ọkwa ọ bụla nke ebe nrụọrụ weebụ na SERPs. Ọ bụ ya mere ị na-agbaso usoro nkwado azụ kwesịrị ekwesị jikọtara na ọganihu dị ugbu a n'ọkwado dị mma n'ịntanetị karịa ihe ọ bụla ọzọ. N'iburu n'uche na e nwere ihe karịrị narị ogo ogo asatọ nke ndị ọkachamara nchọta ụwa natara maka ugbu a, nkwupụta ahụ banyere ihe dị mkpa kachasị mma nke backlinks dị mma, ọ bụghị ya? N'ezie, ịchọta usoro ngwa ngwa ngwa ngwa ma dị mfe bụ ihe kariri ka ọ ga-enye gị njikọ dị ala. Ọ pụtara na isi engines ọchụchọ (dị ka Google onwe ya, yana Yahoo, ma ọ bụ Bing) ga-ewepụta weebụsaịtị gị ma ọ bụ blog na ndepụta nke SERPs. Ma olee ihe na-eme ka atụmatụ ụlọ ọrụ na-aga nke ọma? Ekwenyere m na ihe ọ bụla a na-eji azụlink nwere ike ịghọ ihe ịga nke ọma site na iji ike nke mgbasa ozi akwụ ụgwọ gị.
Ọ dịghị mkpa ikwu na site na echiche nke njikọ njikọ, ọ bụghị weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ niile ga-aha ka inye mgbaàmà dị ike ụlọ ọrụ ọchụchọ - epel-release-5-4.noarch.rpm. Ọ bụ nke a ka ọtụtụ n'ime mmadụ niile chọrọ iji jikọta ndị ọzọ na isi mmalite ndị nwere ike dị ike na njikwa akwụkwọ, ikike mpaghara, na PageRank. Ya mere, otu esi eme ka okporo ụzọ azụlink gị bụrụ ihe ezi uche dị na ya iji zoo n'elu ebe kwesịrị ekwesị maka ịbịaru njikọ? Site na ime ka ọ bụrụ ihe dị mma ma na-adị kwa ụbọchị site na nhazi ziri ezi. N'etiti ụlọ ọrụ data ntanetị ndị ọzọ, ana m akwado Cision iji dọọ naanị saịtị ndị a ma ama na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ n'ahịa ahịa. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike nyochaa onye ọ bụla nwere ike ịbanye maka njikọ dị iche iche site na njirisi dị iche iche banyere ụlọ ọrụ, ebe nrụọrụ weebụ ya, ụba ndị na-ege ntị, onyinye ugbu a, nkwenye, wdg.
Mee Ntụkwasị Obi
Ị maara na ịzụlite usoro azụ azụ gị gburugburu ndị na-eme ihe ziri ezi na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ niche ahịa nwere ike inyere gị aka iwulite ntụkwasị obi siri ike? N'igosi ya n'asụsụ Bekee, ndị ahịa gị nwere ike ịghọ ndị na-azụ ahịa n'ezie, mgbe a na-akpọ ma ọ bụ jikọta ebe nrụọrụ weebụ gị site n'aka onye ọzọ nwere ike ịtụkwasị obi. Kedu ihe ọzọ - nke a ga - abụ "mgbasa ozi" a ga - enweta "dị ike karịa ihe ọ bụla mgbasa ozi mgbasa ozi. Naanị were ya n'enweghị ihe ọ bụla - mgbasa ozi a tụkwasịrị obi bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa nwere mmetụta kachasị na gị na-eleta ndị na-ege ntị ma na-enweghi mkpebi ịzụtaghị ego.
Get Media Deeds
Ịrụ ọrụ na mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ abụghị ihe nhụjuanya dịka i nwere ike iche. N'ezie, ọ gaghị enwe ihe ọ bụla omenala na-ewe oge ọ dị mkpa maka mgbasa ozi mgbasa ozi, ma ọ dịkarịa ala iji mee ka usoro nlezianya na-aga nke ọma. Ihe niile ị chọrọ ebe a nwere ohere na ikike ịzaghachi na ohere mgbasa ozi, nke ndị nta akụkọ na-ejikarị mara. N'ụzọ dị otú ahụ, ana m akwado iji ngwaọrụ dị ka HARO ("Nyere onye na-ede akụkọ aka"), nakwa ProfNet - achọtara m na ha abụọ dị mma maka ụlọ ọrụ m na-eme n'oge na-adịbeghị anya na ọrụ abụọ nke ecommerce. Naanị ịbanye na saịtị ndị a ma ghọọ ikike isi na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ n'ahịa ahịa - nata arịrịọ kwa ụbọchị site n'aka ndị dị elu na-achọ ndị ọkachamara ka a gbaa ajụjụ ọnụ ma ọ bụ tinye na akụkọ ha kachasị ewu ewu, ma nweta ụfọdụ backlinks dị elu maka nke a.